The OPPO Reno na-eze ulo oru na Europe | Gam akporosis
Izu abụọ gara aga ka e wetara OPPO Reno na eze na China. Ọ bụ ezie na amaraworị na na mgbakwunye na ngosi ya na China, akara ga-ahazi ngosi maka ekwentị a na Europe. Ihe ngosi ndokwa maka Eprel 24, dị ka ọ dịlarị na nke a. Ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China na-abịarute na ahịa Europe.
The Chinese ika hapụrụ anyị abụọ ụdị a ngosi, nkịtị nlereanya na njedebe dị elu na 5G. Ugbu a, mwepụta nke ekwentị abụọ a site na OPPO Reno na ahịa Europe. Kedu ọnụahịa na-echere anyị n'akụkụ a?
Febọchị ole na ole gara aga ọnụahịa leaked na ekwentị ga-enwe na ya igba egbe. Ugbu a, ekwenti ekwuputala ma anyị enwetala data niile na mbata nke ụdị ọhụrụ nke akara ndị China na ahịa Europe. Ogologo nke ika a nwere olile anya iji merie ahia.
OPPO Reno ga-arụ ọrụ nke ọma na Europe na May 10. A ga-ewepụta ya na agba abụọ (Ocean Green na Jet Black). Anyị amaghị ụdị nsụgharị ekwentị ga-ahapụ. Mana a na-atụ anya iru ụlọ ahịa na ọnụahịa nke 499 euro, nke bụ ọnụahịa ahụ leaked otu izu gara aga.
N'aka nke ọzọ, a ga-ebupute OPPO Reno 5G na ahịa Europe na mbido June. Enweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ n'oge a, ọ bụ ezie na n'ihe banyere Switzerland ọ ga-abụ na njedebe nke Mee. Ọnụ ya ga-abụ euro 899, dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro. Anyị nwekwara Reno 10X, nke bụ ụdị mbipụta dị elu na-enweghị 5G, na nke ya, ọ ga-efu euro 799.
O doro anya na, ndị a OPPO Reno na-anọchi anya mmeghari ohuru dị mkpa maka ika China. Rangedị dị mma iji mee ka ọnụnọ gị dị na ahịa Europe. Ya mere, anyị na-echere ịhụ ụdị ahịa ekwentị ndị a nwere n'ọnwa ndị na-abịanụ. Kedu ihe ị chere gbasara ọnụahịa ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The OPPO Reno na eze rutere na Europe